လမ်းဘေးကကလေးတွေကို သနား လို့  တွေ့တိုင်း ပိုက်ဆံလှူပေးဖြ စ် တယ် ဆိုတဲ့ ရဲလေးမ – XB Media Myanmar
လမ်းဘေးကကလေးတွေကို သနား လို့  တွေ့တိုင်း ပိုက်ဆံလှူပေးဖြ စ် တယ် ဆိုတဲ့ ရဲလေးမ
ရဲလေးမကတော့ ဟာသဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော်တော် များ များမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရသူတစ်ယောက်ပါ။ မိန်းမလျာကာရိုက်တာနဲ့ အများဆုံးတွေ့မြင် ရေ လ့ရှိတဲ့အပြင် ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ ပီပြင်စွာပါဝင်အားဖြည့်လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ဆိုရင် လည်း မမှားပါဘူး။သူကတော့ အနုပညာကြေးအနည်းငယ်သာရတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတ ယာက်မို့ မပြေလည်တဲ့စားဝတ်နေရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းကာ ဖြေရှင်းနေ သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးဟာဆိုရင်လည်း အခုဆိုအတန်အသင့်အောင်မြ င်မှုရနေပြီ လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပိုက်ဆံမချမ်းသာပေမယ့် မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ဘဝကိုရပ်တည်နေသူ ရဲလေးမကတော့ ဒီနေ့မှာ သူလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အလှူလေးတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “သူတို့လေးတွေလည်း လူထဲကလူပါပဲ…. အနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့သူတို့လေးတွေကိုစာနာတယ်… သနားတယ်… ဒါ့ေ ကြာင့်တွေ့တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာ တတ်နိုင်သလောက်အမြဲလှူတယ်ပေးတယ်… အများကြီး မလှူနိုင်ဘူး… နိုင်သလောက်လှူတယ်… အနာဂါတ်အလင်းတစ်ခုထွန်းလင်းပြီး လမ်းကြောင်းမှ န်တဲ့ဘဝ‌လေးတစ်ခုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဦးရဲလေးမဆုတောင်းရုံမှတစ်ပါး” ဆိုပြီး လမ်းေ ဘးက ကလေးတွေကိုလှူဒါန်းပေးနေကြအလှူလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အနှံ့မှာတော့ လမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေတဲ့ကလေးတွေ၊ အမှိုက်ကောက်နေရတဲ့ ကလေးတွေ များစွာရှိနေပြီး အနာဂတ်မဲ့နေတဲ့သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝကို ရဲလေးမကတော့ စာနာ သနားစွာနဲ့ တွေ့တိုင်းကူညီပေးဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသ တ်ကြီးရေ… ရဲလေးမတစ်ယောက် ဒီထက်မက အလုပ်တွေ အဆင်ပြေပြီး အားငယ်နေသူတွေ ကို စိတ်ရှိတိုင်း ဖေးမကူညီနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ရဲလေးမကတော့ ဟာသဇာတျပို့ဇာတျရံတဈယောကျအနနေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတျောတျော မြား မြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျနရေသူတဈယောကျပါ။ မိနျးမလြာကာရိုကျတာနဲ့ အမြား ဆုံးတှမွေ့ငျ ရေ လ့ရှိတဲ့အပွငျ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာ ပီပွငျစှာပါဝငျအားဖွညျ့လေ့ ရှိ သူတဈယောကျဆိုရငျ လညျး မမှားပါဘူး။သူကတော့ အနုပညာကွေးအနညျးငယျသာရတဲ့ ဇာတျပို့ဇာတျရံတ ယာကျမို့ မပွလေညျတဲ့စားဝတျနရေေးကို တဈဖကျတဈလမျးကနေ မုနျ့ ဟငျးခါးရောငျးကာ ဖွရှေငျးနေ သူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျလေးဟာဆိုရငျလညျး အခုဆိုအတနျအသငျ့အောငျမွ ငျမှုရနပွေီ လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပိုကျဆံမခမျြးသာပမေယျ့ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားလေးနဲ့ဘဝကိုရပျတညျနသေူ ရဲလေးမကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူလုပျနကွေဖွဈတဲ့အလှူလေးတဈခုကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ “သူတို့လေးတှလေညျး လူထဲကလူပါပဲ…. အနာဂတျပြောကျနတေဲ့သူတို့လေးတှကေိုစာနာတယျ… သနားတယျ… ဒါ့ေ ကွာငျ့တှတေဲ့နရောရောကျတဲ့နရော တတျနိုငျသလောကျအမွဲလှူတယျပေးတယျ… အမြားကွီး မလှူနိုငျဘူး… နိုငျသလောကျလှူတယျ… အနာဂါတျအလငျးတဈခုထှနျးလငျးပွီး လမျးကွော ငျး မှ နျတဲ့ဘဝ‌လေးတဈခုအမွနျဆုံးပိုငျဆိုငျပါစလေို့ ဦးရဲလေးမဆုတောငျးရုံမှတဈပါး” ဆိုပွီး လမျးေ ဘးက ကလေးတှကေိုလှူဒါနျးပေးနကွေအလှူလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့အနှံ့မှာတော့ လမျးဘေးမှာတောငျးစားနတေဲ့ကလေးတှေ၊ အမှိုကျကောကျနေ ရတဲ့ ကလေးတှေ မြားစှာရှိနပွေီး အနာဂတျမဲ့နတေဲ့သူတို့လေးတှရေဲ့ဘဝကို ရဲလေးမကတော့ စာနာ သနားစှာနဲ့ တှတေို့ငျးကူညီပေးဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့အလှူလေးကို မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတ ယျ ပရိသ တျကွီးရေ… ရဲလေးမတဈယောကျ ဒီထကျမက အလုပျတှေ အဆငျပွပွေီး အားငယျ နသေူတှေ ကို စိတျရှိတိုငျး ဖေးမကူညီနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။
အခွအေနအေရ တကျစီမောငျးနေ ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံကို ပွောပွလာတဲ့ လူကွမျးသရုပျဆောငျ အောငျတိုး”